musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Ndeipi Kugumo Ine Vazhinji Vanoremekedza Vashanyi?
Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vatariri vane hunyanzvi
Kana zvasvika pakufamba kwenyika dzese, ndeyemire mirefu, uye pamwe isina kunaka, stereotype yekuti vashanyi vekuAmerican havasi ivo vashanyi vane hunyanzvi, vane mashoma magariro uye vanozivikanwa sevanonzwika uye vasingafadzi. Iyi pfungwa inogona kunge ichichinja mumashure-COVID nguva, senzvimbo dzepasi rese dzinoshuvira vashanyi veAmerica.
Wanga uchiziva here kuti vanhu vanobva kuHong Kong vanovenga kuvezwa neziso?
Kana kuti munhu anonyemwerera wechiJapan haasi kufara chaizvo?
Ruoko rwakaipa ruoko kana chirevo zvine mukana wekushandura mamiriro ekufamba zvakashata.
Tora chero gwara rekufambisa uye iwe ungangowana chikamu chakatsaurirwa kune yakasarudzika yakasarudzika tsika tsika izvo iwe zvaungaita zvakanaka kudzidza usati watanga rwendo rwekuenda kwakawanda. Asi vanhu veAmerica vanoita sei mukati memiganhu yayo? Zororo rekubata webhusaiti, NextVacay.com, yakaronga "indasitiri yekuremekedza indekisi" yekuona, nyika nenyika, izvo maAmerican vane mukurumbira uye mukurumbira mukurumbira pavanenge vachienda kuzororo.
Vakaongorora vanhu zviuru zvitatu uye vakakumbira vakapindura kuti vaongorore ruremekedzo rwevashanyi pachiyero kubva pa3,000 kusvika pa1. Zvakaonekwa kuti vashanyi vane ruremekedzo vanobva kuAlaska, vachisimbisa 10/8 yakasimba yemaitiro avo ekufamba. Inozivikanwa seyakanaka kuradzikwa kumashure, pamwe hazvishamise vafambi veAlaska vanoverengerwa zvakanyanya - vanhu vakanaka veThe Last Frontier vanozivawo kufamba - iyo Alaska Interstate mugwagwa mukuru unoumbwa nemigwagwa mina chete, saka ivo vakajaira kuve kugadzirisa zvirongwa zvekufamba pasina zvichemo.
Hawaii Yakatarirwa panzvimbo yechipiri
Izvi zvimwe hazvishamise tichifunga kuti nyika inozivikanwa neayo Aloha Mweya unodira mukati kune vashanyi kushanya ikoko. Iyo yakaipa sei nzvimbo inogona kuve iyo iwe paunokwaziswa ne maruva garland lei uye vagari vanofara kubatsira nemadirections uye nemazano, vese vaine "Hapana kunetseka" sechikamu chekutungamira kwavo? Pane chikonzero chakanaka icho chinonzi Paradhiso.
Vashoma vanoremekedza vashanyi
Vanopfuura mumwe muvatatu vanoti vane zororo rakaparadzwa nehunhu hwakaipa hwevamwe vashanyi. VASHURE vanoshanya vashanyi, zvisinei, vaive vanobva mudunhu reWashington, vakaisa chinzvimbo chete pavane gumi. Kunyange hazvo iyo Evergreen State inogona kuramba ichikwikwidza zvakanyanya kana zvasvika kumatunhu anochengetedza zvakatipoteredza, mukurumbira wayo kana zvasvika pakuita hushamwari zvinotora zvakanyanya . Zvinoenderana neongororo yakaitwa mu1, inopfuura hafu yevagari vePacific Northwest havatombodi kutaura muchidimbu kuvanhu vavasati vatoziva. Inopa kutenda kune chiitiko chinozivikanwa se "Seattle Freeze" - izvo zvinoreva chitendero chakabatwa nevazhinji kuti chakanyanya kunetsa kuita shamwari nyowani muguta reWashington reSeattle. Kana vasingawirirane zvakanyanya nehama dzekwavo, pamwe hazvishamise kuti havazvifarire kune vamwe vanobva kune dzimwe nyika pavanenge vari pazororo. Zvakaenzana sevasina hunhu, vashanyi vanobva kuConnecticut vakaisa chinzvimbo chechina pagumi.
Inopindirana Vashanyi Politeness Index
Zvinoitawo semaAmerican vane maonero asingasviki pane akanaka evamwe vavo kana vachienda kunze kwenyika. Vasingasviki hafu vanofunga kuti vashanyi vekuAmerica kune dzimwe nyika vane hunhu uye, nekudaro, havamiriri nyika yavo mushe - izvo zvinokonzeresa vanhu vanosvika 68 muzana yevakabvunzwa kuti vabvume kuti vangangodzivirira kuenda kune imwe nyika kana vachiziva kuti vane mukurumbira wakashata. ipapo.
Pedyo neimba, ingangoita hafu (makumi mana kubva muzana) yeavo vakaongororwa vanogara munzvimbo dzinotariswa vashanyi vakati vaizonyatsobva (kana vachigona) kumwaka wezororo, kungodzivirira vashanyi. Uye 42 muvatatu vakapindura vakati vakave nezororo repamba zvisina kunaka nekuda kwehunhu hwakaipa hwevamwe vanozorora. Chokwadi, panogona kuve nenguva dzakati dzegore - senge Spring Break - izvo zvinogona kukwezva vashanyi vane tsika dzakanaka.
Kunyangwe paine fungidziro, zvinokurudzira kuti yakakura 82 muzana yevashanyi vekuAmerica vanoti vachatevera zvakanyanya COVID maprotocol pavanenge vachienda kunze kwenyika, kunge mask yekupfeka uye kushamwaridzana kure.
Chekupedzisira, makumi matatu neshanu muzana vanobvuma kuti vanonyatsosuwa America pavanenge vari kunze kwenyika.